Ninja Tepppanyaki Restaurant | Sanchaung | Yangon | yathar
Address No (21). မဂ်လာလမ်းနှင့် ပန်းခြံလမ်း ထောင့်၊စမ်းချောင်းြမို့၊ ရန်ကုန်, Sanchaung, Yangon
Genre Grilled meat , Steak , Japanese‐style barbecue cooked in front of customers , Lunch box , BBQ
No (21). မဂ်လာလမ်းနှင့် ပန်းခြံလမ်း ထောင့်၊စမ်းချောင်းြမို့၊ ရန်ကုန်, Sanchaung, Yangon